Akhriso: War-murtiyeedka heshiiska Dowladaha Ereteriya iyo Soomaaliya – Banaadir Times
By banaadir 30th July 2018 185 No comment
Iyada oo maanka lagu hayo xiriirka iyo saaxiibtinimada qotoda dheer ee labada
shacab ee Ereteriya iyo Soomaaliya;
Iyada oo dib loo millicsanayo xaqiiqada ah in shucuubta Soomaaliya iyo Ereteriya ay si joogta;
ah isu garab istaageen, isuguna taageereen halgankii mid kasta ugu jirey
xornimada, madaxbannaanida iyo horumarka;
Iyada oo lagu salaynayo xiriirka walaaltinnimo ee taariikhiga ah,
iyo dedaalka ay labada dowladood ugu jiraan yagleelidda iskaashi labada dhinac ah, oo u faa’iidaynaya labada dal iyo guud ahaan gobolka;
1- Soomaaliya waxay ku taallaa goob istiraatiiji ah, waxayna
leedahay khayraad tiro badan oo isugu jira kuwo aadmi iyo kuwo dabiici ah.
2- Soomaaliya iyo Ereteriya waxay dedaal gelinayaan sidii ay u sameysan
lahaayeen iskaashi taabanaya dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada, dhaqanka, difaaca iyo amniga.
3- Labada dal waxay yagleelayaan xiriir diblomaasiyadeed iyaga oo is dhaafsanaya danjireyaal, sarena u qaadaya ganacsiga iyo maalgashiga dhexdooda ah, sidoo kalena isweydaarsanaya fursadaha la xiriira waxbarashada iyo dhaqanka.
4- Ereteriya iyo Soomaaliya waxay si wadajir ah uga hawlgelayaan sidii loo
horumarin lahaa nabadgelyada, xasilloonida iyo isdhexgalka dhaqaale ee gobolka.
Kooxda Alshabaab oo Madaafiic ku garaacday Saldhig Ciidamada Amisom ay ku leeyihiin Baraawe
Guddoomiyaha Aqalka Sare & Siyaasiyiinta Gobolada Waqooyi oo qaadacay shirka Dhuusamareeb